बास्कोटालाई सपनामा पनि नसोचेको झड्का: ६ अर्ब घोटाला गरेको भिडियो नै सार्वजनिक हुदैँ ! (हेर्नुस् भिडियो) – Dainik Sangalo
September 3, 2020 590
उन्नाइस दिनपछि फेरि कोरोना संक्रमण दोहोरिएका अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरे कार्यकाल सकिएर भदौ २८ गतेदेखि बिदा हुन लागेसङ्गै पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि लागेको कमिशन मोलमोलाईको आरोपमा आयोगले सफाई दिन लागेको बजार हल्ला व्याप्त छ ।
एकातिर कर्मचारीको अभाव, बन्दाबन्दीको असर र अर्कोतिर उजुरीको संख्या २५ प्रतिशतले बढेपछि आयोगको कामसमेत प्रभावित भएको बताइन्छ ।(जनआस्थाबाट
विजय मिश्र भन्छन्– भागेको होइन, रेकर्डिङ डिभाइस लिन जापान गएको हुँ
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणमा पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक गर्ने विजयप्रकाश मिश्रले आफू भागेको नभएर रेकर्डिङ डिभाइस लिन जापान पुगेको बताएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७ दिनभित्र उपस्थित हुन सूचना प्रकाशित गरेकै दिन आज विज्ञप्ति जारी गरेर मिश्रले आफू मुद्दाबाट भागेको नभएर कामले नै जापान गएको दाबी गरेका हुन्।
बाँस्कोटाको मुद्दा कमजोर पार्न मिश्र भागेको भन्ने समाचार बाहिरिएपछि उनले त्यसको खण्डन गरेका हुन्।
‘पत्रको आधारमा रेकर्डिङ डिभाइस मैले अख्तियारलाई बुझाउनुपर्ने र त्यो डिभाइस जापानमा भएको हुँदा डिभाइस लिन म जापान आएको हुँ । मेरो नेपाल फर्किने फ्लाइट निश्चित भइसकेको अवस्थामा भागेर जापान गयो भन्ने समाचार सम्प्रेषण गर्नु भनेको आफूले गरेको पत्रकारितामाथि विश्वास नगर्नु हो,’ विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
७० करोड घुस काण्डमा जोडिएका विजय मिश्रलाई अख्तियारको ७ दिने म्याद
कोही पनि भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति कानुनबाट उम्किन नसक्ने उनले बताएका छन्। ‘कुनै पनि राजनीतिक व्यक्ति होस् वा सर्वसाधारण, भ्रष्टाचारजस्तो राज्यविरुद्धको जघन्य अपराधबाट उम्कन सक्दैन। र, प्रतिपक्षबाट जति पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत मलाई आक्रमण गरी आफू पवित्र बन्न खोज्नु नेपाली राजनीतिमा देखिएको चरित्र हो,’ उनले भनेका छन्।
साथै उनले मुद्दा कमजोर पार्न नदिनेसमेत बताएका छन्। ‘म कसैको दबाब वा कसैको कुरा सुनेर बहकिने व्यक्ति होइन। एक सच्चा नागरिकले राज्यप्रति बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूर्णरुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने कुरा मलाई राम्ररी थााहा छ। साथै जस्तोसुकै दुःख कष्टमा पनि बाटो नबिरार्ई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नेछु भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु’, मिश्रले भनेका छन्।
७० करोड कमिसन काण्डमा बयान दिनुपर्ने मिश्र विदेशमा रहेको भन्दै अख्तियारले उक्त मुद्दा तामेलीमा राख्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।
प्रेस खरिद गरेपछि प्राप्त हुने कमिसनको मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २०७६ फागुन ८ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
Prevपोखराकी ईन्स्पेक्टर चन्द्रा नेपालको दोश्रो महिला गुल्मपति
Nextभ्रष्ट भन्दैं डब्ल्यूएचओको निद हराम हुनेगरी अमेरिकाले चाल्यो अहिलेसम्मकै कडा कदम, विश्वभर मच्चियो खैलाबैला !
सांसदलाई दशैं भत्ता दिनु भन्दा भेन्टिलेटर किनाैं – जनार्दन शर्मा
त्रिपुरापुरासुन्दरी १ जिपजिपे पाखा सल्यानटार सडक खण्डमा पिचको काय हुँदै गर्दा एक महिलाको मृत्यु